InstaZoom - Ku balaadhi sawirka astaanta Instagram HD oo buuxa
InstaZOOM - Balaadhi sawirka bogga Instagram
Arag oo soo deji sawirada bogga Instagram ee tayada ugu sarreeya.
Soo deji Insta DP iyo qaar kaloo badan
Isticmaal agabka soo dejinta Instagram-ka si aad u ilaaliso daqiiqadaha ugu fiican qalabkaaga waligaa
Ahaa ist Instazoom?
Instragram waa shabakad bulsho oo leh in ka badan 600 milyan isticmaaleyaal firfircoon. Instazoom waa daawadihii ugu horeeyay aduunka ee Instagram kaas oo kuu ogolaanaya inaad daawato sawirada profile size buuxa, soo dejiso, iyo in ka badan. Instazoom waa adeeg online ah oo soo bandhigaya sawir kasta oo ku jira akoon kasta oo isticmaaleyaal ah oo u qaabaysan qaab weyn adigoon ka tagin daaqada browserka.
Xaddidyada Daawashada Instadp
Instadp muddo dheer ayay jirtay, mustaqbalkana ma bixi doono. Laakiin maxaa dhacaya haddii aad rabto inaad aragto sawirka profile qofka oo muuqaal buuxa ah? Instagram ayaa xaddidaysa doorashadan, si kastaba ha ahaatee Instazoom maaha! Soo dhaweynta Instagram waxay ku siinaysaa beddelka aragtida xaddidan ee Instagram, taasoo kuu oggolaanaysa inaad kor u qaaddo sawirka Instagram zoom ee isticmaaleyaasha aad jeceshahay iyada oo aan xaddidnayn ama xaddidnayn. Instazoom waxay ku siinaysaa marin u helka dhammaan dhinacyada Instadp-Akoonka qofka.
codsiga Instazoom nolosha?
Aqoonsiga dadka ku jira sawirrada: Sawirrada astaanta Instagram-ka waa kuwo qaraarkoodu hooseeyaan, taas oo adkeyn karta in la garto dadka sawirrada ku jira. leh Instazoom Waxaad arki kartaa sawirka astaanta Instagram oo la soo dhoweeyay oo qaraarkiisu sareeyo, taasoo u sahlaysa in la aqoonsado asxaabtooda iyo qoyskooda.
Waxaad ku ogaan kartaa in sawirka profile-ku uu dhab yahay adiga oo la barbar dhigo qof kale sawirkiisa saxda ah.
Koobi sawirkaaga cusub oo ku dheji qalabkaaga gaarka ah: waxaad soo dejisan kartaa sawirka oo aad ku kaydin kartaa gallerykaaga si aad hadhow u daawato, ama u isticmaal gidaar ahaan taleefankaaga ama kumbuyuutarkaaga.
Weligaa miyaad codsiyo qariib ah ka heshay Instagram-ka shisheeyaha dhammaystiran? Kahor intaadan go'aansanin, ka fiirso in lagu sameeyay niyad wanaag ama xumaan.
Isticmaalka aan xadidnayn - Instazoom waxaa loo isticmaali karaa waxyaabo kala duwan.
Sida ay u shaqeyso Instazoom?
Instazoom waxay ku tiirsan tahay magacaaga profile ama url profile profile ama qof ku jira Instagram sawiro. Instazoom Balaadhi sawirada Instagram si aad u soo saarto sawirada tayada ugu fiican.
Iyada oo la adeegsanayo Insta Zoom, waxaad si dhakhso ah u soo dhex gelin kartaa Insta Profile oo aad ku shubi kartaa sawirada astaanta isticmaaleyaasha kale ee Instagram. Insta Zoom wuxuu kaa caawinayaa inaad u habayso sawirka profile kaaga Insta oo leh tayada HD.
Sida loo balaadhiyo ama loo soo dejiyo sawirka profile Instagram Instazoom?
Tallaabada 1: Booqo boggayaga hoyga: www.instazoom.mobi
Tallaabada 2: Geli url Instagram ama magaca isticmaale sanduuqa raadinta ee shabakada ka dibna ku dhufo badhanka"zoom".
Tallaabada 3: Marka natiijadu soo baxdo, waxaad riixi kartaa badhanka aragtida xayawaanka si aad u aragto sawirka astaanta Instagram-ka ee la soo dhaweeyey ee tayada ugu fiican leh.
Tallaabada 4: Guji badhanka soo dejinta si aad u soo dejiso sawirka profile kaaga oo ah tayada ugu sareysa.
Su'aalo InstaZoom - InstaDp
Ist Instazoom sharci ah?
Instazoom gabi ahaanba waa sharci maadaama profiles Instagram si guud loo wadaago. Instazoom- Markaa isticmaalayaashu gabi ahaanba waa sharci.
Ist Instazoom software ah?
Ma aha! Instazoom waa shabakad kuu ogolaanaysa inaad daawato oo aad soo dejiso sawirada profile Instagram tayada ugu fiican.
Sideen u soo dejisan karaa sawirka profile Instagram kombayutarka?
Instazoom si fiican ugu shaqeeya qalab kasta. Waxaad www.Instazoom.Mobi booqo si aad u soo dejiso sawirka profile Instagram ugu fiican ee PC-gaaga.
Waa maxay sawirka astaanta guud ee Instagram-ka oo weyn - insta zoom?
Tani waa sida ay u shaqeyso Instazoom asal ahaan. Caadiyan, Instagramku kuma ogola inaad soo bandhigto sawirada astaanta guud ee tayada ugu fiican. Instazoom waxaa loogu talagalay in lagu ballaariyo oo lagu cusboonaysiiyo tayada ugu tayada wanaagsan sawirada astaanta Instagram si loo daawado loona soo dejiyo.
Ma u arki karaa xisaabaha si qarsoodi ah natiijada awgeed?
Ma aha! Waxaan u oggolaan kaliya isticmaalayaasha inay isticmaalaan Instazoom leh akoonnada Instagram ee dadweynaha.
Ist Instazoom bilaash ah?
Instazoom waa bilaash. Wax kharash dheeraad ah kuma dalaco. Adiguna sidaas oo kale Instazoom si ay u isticmaalaan xasilooni buuxda oo maskaxeed.
Inta badan iZoomYou suuqa ku jira hadda ma fir fircoon yihiin ama ma deggana, tayadoodu hooseyso marka sawirada la soo dejinayo. InstaZoom Markaa waa beddelka ugu fiican ee iZoomYou si aad u aragto macluumaadka oo aad u soo dejiso sawirada astaanta Instagram oo leh tayada ugu fiican.
Shabakadda Izuum DB hadda ma shaqaynayso. Instazoom sidoo kale waa aaladda ugu fiican ee lagu badalo Izuum si loo weyneeyo sawirka profile Instagram oo leh tayada ugu fiican.
hat Instazoom kordhin?
Haa waad heli kartaa Instazoom-Kordhinta dukaanka add-ons ee Chrome- iyo Firefox- browser-yada.
Sidee u shaqeysaa Instazoom- Kordhinta?
Hoos waxaad ka daawan kartaa casharo fiidiyoow ah oo ku saabsan sida loo isticmaalo Instazoom-Fiiri kordhinta: